टिप्स - Onlinepatra.com
अनलाइनपत्र संवाददाता १ माघ २०७७, बिहीबार २२:३४
सबैको चाहना हुन्छ, जीवन आफूले चाहेजस्तै होओस् । आफूले चाहेको गतिमा हिँडोस् । जीवन सुखी होओस् । रमाईलो गरी बितोस् ।ग्रिसका प्रतिष्ठित दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका छन्, हामी त्यही हौँ, जे हामी बारम्बार गर्छौ । उत्कृष्ट कुनै कार्यबाट हुने…
अनलाइनपत्र संवाददाता २४ पुष २०७७, शुक्रबार ०६:०७
नाडीबाट शुरू भएर माथितर्फ जाने रेखालाई भाग्य रेखा भनिन्छ । यो रेखा अनामिकाको मुनि पुगेर सकिन्छ । हस्तरेखामा भाग्य रेखा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट व्यक्तिको व्यापार, रोजगारीका साथै जीवनका सफलता एवम् असफलताबारे जान्न सकिन्छ ।…
अनलाइनपत्र संवाददाता २८ मंसिर २०७७, आईतवार २०:२७
आजकल सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने उपकरण भनेको तपाईंको स्मार्टफोन हो। अफिसको घण्टौं चल्ने कलहरू, साथीहरू र आफन्तहरूसँग अन्तर्क्रिया, गृहकार्य र मनोरन्जन, सबै कुराको लागि फोन चाहिन्छ। यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा धेरै दबाब तपाईँको फोनको…
अनलाइनपत्र संवाददाता १३ मंसिर २०७७, शनिबार २२:०५
गाडी चलाउँदा दिमाग सधैँ सक्रिय राख्नुपर्छ। दिमाग सक्रिय रह्यो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ गाडी चलाउँदाचलाउँदै ब्रेक फेल हुन्छ। यस्तो स्थिति निकै दुलर्भ हुन्छ। तर यदि चालकको दिमाग शान्त र सक्रिय भने ब्रेक फेलकै…
अनलाइनपत्र संवाददाता ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:४६
अहिले मानिसहरुको मुख्य समस्या भनेको रोजगारी,कमाई हो । मानिसलाई कमाइले जति सताइरहेको छ त्योभन्दा बढि उनीहरुले त्यसलाई बचाउन नसकेर समस्यामा परेका छन्। त्यसैले कतिपय मान्छेले भन्ने गर्छन ‘मेरो हातमा त पैसा नै बच्दैन के गर्ने होला, यदि…
अनलाइनपत्र संवाददाता २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १२:४१
काठमाडौं - मानव जीवनमा धन, सम्पत्ति, पैसाको धेरै महत्व छ । धन अर्थात् पैसा कमाउन पनि गाह्रो छ र बचाउन पनि । धनलाई जोगाउनका लागि पनि धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी पैसा गन्दा, राख्दा, दिँदा, लिदा पनि गल्ति गरिरहेका…
अनलाइनपत्र संवाददाता १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार २२:३३
कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्य कुराको खुलासा पनि तपाईको कुन्डलीले गर्छ ।तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक…
अनलाइनपत्र संवाददाता १५ भाद्र २०७७, सोमबार ००:३९
म्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने दुबैको जिबन नर्ग समान हुन्छ । कतिपय मानिसहरुको…
अनलाइनपत्र संवाददाता २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०१:३०
हामीले आफूभन्दा सम्मानित मानिसलाई नमस्कार गर्दछौ । सामान्यतया नमस्कार सम्मानको सूचक हो । हिन्दू धर्म अनुसार नमस्कारको महत्व व्यापक छ । भगवानलाई पूजा गर्दा समेत नमस्कार अनिवार्य रुपमा गरिन्छ । यसकारण नमस्कारले केही न केही…
के तपाइलाई रुघाले सतायो ? अपनाउनुस् यी ५ सरल घरेलु उपाय
अनलाइनपत्र संवाददाता २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०१:०६
मौसम परिवर्तनको संघारमा रुघाखोकीको प्रकोप बढ्न गर्दछ । कतिपयले रुघाखोकी बढ्नेवित्तिकै अस्पताल धाउने र अनेक खालका ओषधी प्रयोग गर्ने गरेका छन् तर रुघाखोकी ‘सामान्य र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन’ भएकाले यस्तोमा आधुनिक औषधीको प्रयोग आवश्यक…